Guji hoos si aad u aragto liiska cuntada ee ITCA WIC.
Kaarkaaga Nevada WIC EBT Card wuxuu hayaa dhammaan faa'iidooyinka qoyskaaga oo dhan. Rugta caafimaadka ee WIC, waxaad ka heli doontaa liistada faa'iidooyinka cuntada ee qoyskaaga ee WIC bisha hadda jirta iyo labada bilood ee soo socda.
Rugtaada WIC ayaa mas'uul ka ah qoritaanka cuntadaada iyo gelitaanka dheefahaaga nidaamka. Waxaad heli doontaa hal kaar oo ah Nevada WIC EBT Card oo haysa dhammaan faa'iidooyinka qoyskaaga oo dhan. Waxaad ka heli doontaa liistada wax kala iibsiga ee rugtaada caafimaad oo ku tusaya dhammaan faa'iidooyinka laga heli karo kaarkaaga.
Waa inaad la xiriirtaa shaqaalahaaga WIC Clinic. Had iyo jeer hubi in cinwaankaagu sax yahay maxaa yeelay sidan ayaa lagu siinayaa kaarkaaga beddelka ah haddii kaarkaaga lumo ama la xado.
PIN-kaagu waa lambar sir ah oo ka kooban afar lambar oo kuu oggolaanaya inaad ku isticmaasho Kaarkaaga Nevada WIC EBT dukaanka raashinka. Kaarkaagu MA shaqeyn doono illaa aad ka doorato lambarkaaga PIN. Waxaad dooran doontaa PIN-kaaga markii aad hesho kaarkaagii ugu horreeyay ee Nevada WIC EBT. Xullo afar lambar oo si fudud aad u xusuusan karto, laakiin ay adag tahay in qof kale ogaado.
Marna ha u sheegin PIN-kaaga cidna! HA ku qorin PIN-kaaga Nevada WIC EBT Card. Haddii qof garanayo lambarkaaga PIN, wuxuu u isticmaali karaa kaarkaaga inuu ku helo dheefahaaga oo dheefahaas lama beddelayo.
Haddii aadan xasuusan karin lambarkaaga PIN, waxaad wacdaa Adeegga Macaamiisha 1-877-234-7056 in la doorto nambarka cusub. Haddii aad geliso PIN khaldan, waxaad heli doontaa saddex fursadood oo dheeraad ah oo aad ku geli karto lambarka saxda ah. Isku dayga afraad kadib, ma awoodi doontid inaad isticmaasho kaarkaaga illaa 12:01 am maalinta ku xigta.
Haddii kaarkaagu lumo ama la xado, isla markiiba u soo sheeg adigoo wacaya Adeegga Macaamiisha. Had iyo jeer wac daqiiqadda aad ku ogaato kaarkaaga la la'yahay. Waa inaad sugto 5-7 maalmood oo shaqo si aad ugu hesho kaarkaaga beddelka ah boosta.
Haddii nidaamka WIC EBT ee dukaanku uusan u oggolaanaynin shey raashin oo ay WIC oggolaatay iibsashadaada WIC, sheyga laguma dari doono liiska cuntooyinka WIC ee ay oggolaatay dukaankaas hadda.
Haddii qasnajiyuhu ku yiraahdo waxaad haysataa "Isku-dheelitir la'aan" mid ka mid ah waxyaabahaaga cuntada WIC, dib u eeg dheelitirkaaga la heli karo. Uma isticmaali kartid Kaarkaaga Nevada WIC EBT inaad ku iibsato waxyaabo badan oo cuntada ka badan inta dheelitirkaaga jira uu tilmaamayo.
Haddii aad u malaynayso in dukaanku qalad sameeyey WAA inaad wacdaa Adeegga Macaamiisha isla marka aad ka war hesho qaladka. Bakhaarka ama Xarumaha WIC midkoodna ma awoodaan inay ku soo celiyaan alaabtaada Kaarkaaga Nevada WIC EBT Card. Waa inaad wacdaa Adeegga Macaamiisha si aad u gudbiso dalab.